"Art Haidi Roof" muVilnius
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » tsika nemagariro » "Art Haidi Roof" muVilnius
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • dzidzo • Lithuania Kupwanya Nhau • nhau • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Lithuanian capital Vilnius yauya neimwezve nzira yekugadzirisa mhinduro yehupenyu hwepashure-hwedenda nemagariro. Guta rakashandura nzvimbo yaro kuita hombe "Art Needs Hapana Roof" vachishandisa zvikwangwani kuratidza 100 mabasa evaLithuania maartist.
"Kunyange hazvo dzimba dzemitambo dzakatovhurwa, zvirambidzo pakuungana kwevanhu zvichiripo," akadaro Remigijus Šimašius, meya weVilnius. "Naizvozvo, Vilnius" anotora padenga rayo. " Isu tashandura pakati peguta kuita rakakura rakavhurika remhepo gallery. Icho chimwe cheakakura kwazvo ekuratidzira muVilnius ane mabasa evana zana maartist. "Tinotarisira kuti chirongwa ichi chinokurudzira hunyanzvi uye mamwe mabasa achapinda mudzimba dzevanhu."
Kuzviparadzanisa, kwakagara kwemwedzi mitatu muLithuania, kwave kwakaomarara kune vemuno maartist, sezvo dzimba dzehunyanzvi dzainge dzakavharwa, uye zviitiko zvakawanda zvepasi rese nezviratidziro zvakamiswa. Nekudaro guta rauya nezano rekukoka maartist kuti afumure mabasa avo eumhizha muguta mahara, mari dzese dziri kufukidzwa neguta uye neanoshanda kunze kwekushambadzira "JCDecaux Lietuva."
Pakati pevanyori pane maartist ane mukurumbira pasi rese, saVilmantas Marcinkevičius, Vytenis Jankūnas, Laisvydė Šalčiūtė, Svajonė naPaulius Stanikas (SetP Stanikas), pamwe naAlgis Kriščiūnas na Živilė Žvėrūna - anofarira zvemadhirama. kukura kwemweya wemunhu.
"Kuvharirwa kwaive nguva yakakosha kwandiri semhizha," vakadaro Mai Žvėrūna. "Yakanga iri nguva yekufungisisa, apo iwe paunogona kumira kuti ufunge zvakadzama nezve nzanga yedu uye nebasa rinoitwa nehunyanzvi mariri. Denda racho rakatiita kuti tiwane nzira nyowani dzekusangana netsika. Ndokusaka chirongwa ichi chichifadza: kwemavhiki akati wandei mabhiribhodi akazadzwa nemabasa ehunyanzvi. "Ini zvino ndave kunyatsoona kuti kuda kuziva uye zviitiko zvitsva zviri kutsiva kutya kwepasirese kwemazuva ekutanga edenda."
Zvese mune zvese, vanopfuura mazana mashanu maartist akaendesa mabasa avo kuti aongororwe, mazhinji acho mumazuva mana chete mushure mekuziviswa. Izvo zvinhu zvekuratidzira zvakasarudzwa zvinoenderana nematanho akati wandei: portfolio yemunyori, kuoneka kwebasa uye kusangana kwayo nenzvimbo yeguta. Dare rekusarudza raive nechinangwa chekunyora chiratidziro chingangomiririra hunyanzvi hweLithuania mune zvese zvakasiyana.
Vagari venyika uye vashanyi veguta vanogona kushandisa mepu chaiyo yekufamba nenzira yekuratidzira. Mr. Kriščiūnas, anova muimbi wematarenda akawanda, kusanganisira mumhanzi, kutora mifananidzo uye kupenda, anofunga kuti chiratidziro che "Art Needs No Roof" inzira huru yekuongorora guta. Semhizha, iye anozivikanwa nekugona kusanganisa hunyanzvi nehukama hwehukama. Muna 2019 akaita gadziriro "Isu Tiri Madzimambo Emarara" mune imwe yemashopu. Iye zvino VaKriščiūnas vanopa zano rekuti "Rwendo rweZviuru Zvezvinhu Zvekugadzira" - rwendo rwakatenderedza zvinhu zvese zve "Unyanzvi Huchidi Rohwe," uchibatanidza kurovedza muviri uye kwepfungwa.
"Iyo inogona kunge iri rwendo rwezuva rose," - akatsanangura. “Zuva rakadai rinogona kuchinja maonero ese eguta. Ini ndinofunga kuti chirongwa ichi hwindo idzva kumoyo yevateereri. Kana hunyanzvi huchiratidzwa chete mumagarari, maartist akaisirwa munharaunda: havazi vese vanotora nguva yekuuya kuzoona kuratidzwa. Asi zvigadzirwa zvehunyanzvi zve "Art Needs Hapana Roof" zvichaonekwa nevanhu vese vari mumugwagwa. "
Chiratidziro hachisi icho chete chinangwa chechiratidziro. Zvese zvinhu zvehunyanzvi zvinotengeswa. Mitengo uye ruzivo rwekuonana zvinogona kuwanikwa pane yakasarudzika webhusaiti. Kune mazana emazana emabasa ehunyanzvi pawebhusaiti, kusanganisira iwo anobva kune yekuvhurika-mhepo kuratidzira.
"Vanhu vanga vasina mukana wekuwana mabheja kwenguva yakareba," akadaro Jolita Vaitkutė, muimbi wechidiki uyo basa rake rinogona kuwanikwa pawebhusaiti. "Tichakatarisana nematambudziko mazhinji, uye" Art Needs Hapana Roof "kuratidzira kunopa kugamuchirwa kuzorora. "Haingogadzire chete mukana wekuti maartist aratidze basa ravo uye vasvike kune vateereri, zvakare mukana wekuti vateereri vafuridzirwe nezviratidzo zvinonakidza uye zvinokonzeresa munzvimbo dzisingatarisirwe."
Jolita Vaitkutė anoshandisa chikafu uye zvimwe zvinhu zvezuva nezuva zvekumisikidza, zvesimba uye mifananidzo. Basa rake rinosanganisira kuratidzwa kwekudya kwemanheru kwevatambi venhabvu Cristiano Ronaldo naLionel Messi vakagadzirwa nezvinhu makumi matanhatu neshanu, senge maoyster, shrimps, mazambiringa, madhiri uye zvinwiwa.
Ivo varongi vekudyidzana ve "Art Needs Hapana Roof" vanotarisira kubatsira maartist kuwedzera vateereri vavo uye panguva imwechete kuvhura hunyanzvi kuvagari nevashanyi veguta. Nekuvhurwa kwemiganhu mukati meEU, Lithuania inova inowanikwa kune vashanyi vekunze uye inozivikanwa seimwe yenzvimbo dzakachengeteka dzekufamba muzhizha rino.
Sevanhu vamwe nevamwe uye mabhizinesi vakatambura kurasikirwa panguva Covid-19 denda uye nekuisa wega, Vilnius akazozivikanwa nekubatana uye mhinduro nyowani. Guta rakasiya nzvimbo huru dzeveruzhinji dzekushandisa maakaresheni emhepo akavhurika. Mannequins akazadza nzvimbo dzisina chinhu pamatafura eresitorendi uye akashandiswa kuratidza kuunganidzwa kwevagadziri vekupfeka veko. Iko kushandiswa kwemabhirabhodi kunyora hombe yakavhurika-air art yekuratidzira mukati meguta iri imwe mhinduro yakadaro.
"Art Needs Hapana Roof" ichagara kwemavhiki matatu, kusvika Chikunguru 26th.
Iwo maBahamas ari munzvimbo yakanaka kuti ubatsirwe na ...
Disney Cruise Line nzvimbo nyowani muna 2023
Kurarama Kwevashanyi Mapiyona Anozivikanwa Neavo ...
Chinese vafambi vakagadzirira uye vanoshushikana kubhururuka zvakare
Yepasi Panyika Inosarudzika Husiku Kirabhu LOUIS XIII Yekupa ...
Sandals Resorts: Makumi emakore ekutarisana neCaribbean
TeamMATES Chirongwa chakatangwa neOutback Steakhouse uye ...
Iyo yazvino Tourism Hero inoita Senegal Proud
China Eastern Airlines yekugamuchira 2022 IATA AGM mu ...
Poland inogadzirira kukanda chikamu chayo chekushanya
Nyowani CDC yambiro yengozi pane yechitatu COVID Shot
US yekufamba masiki mvumo yekuwedzeredzwa kuburikidza nepakati ...
Nyowani yeIndia Ultra-Yakachipa-Inodhura Ndege Inogona Kuva Boon Ye ...